Laba tilmaame oo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah | vfxAlert official blog
Bollinger Band iyo Stochastic
Waxaa qoray bynaryost at Dec 4, 2017
Waxaa jira fikrad ah in xulashooyinka turbo ee soconaya muddada 3-5 daqiiqo aysan ficil ahaan u habboonayn falanqaynta farsamada oo tani waxay leedahay caqli u gaar ah: xilliyada yar yar ee noocan oo kale ah, xaaladaha badankood, "buuqa suuqa" waa la ganacsadaa waxayna u muuqataa inay tahay macquul maaha in la saadaaliyo natiijada. Laakiin, sida ficil ahaan loo muujiyo, fowdo kasta, waxaa sidoo kale jira amar qarsoodi ah iyo qaabab aqoonsan kara istiraatiijiyado la-qabsi ah sida vfxAlert, taas oo loo isticmaali karo calaamadaha xaqiijinta ee falanqaynta farsamada.
Jaantusyada : 30 ilbiriqsi - 60 ilbidhiqsi;
Lammaanaha sarrifka : mid kasta oo leh isbeddel xagga sare ah;
Waqtiga ganacsiga : maalinta ganacsiga oo dhan Forex
Kooxda Bolinger (BB)
Muddo = 14
Jaangooyada caadiga ah = 2
Muddo% D = 13;
WAC: Shumaca wuxuu ka tallaabayaa dhexda khadka hoose ee hoose ilaa kor sheetada ayaa ka sarreysa aagga la soo iibsaday (heerka 20) stochastic-ka ayaa kor u kacaya.
PUT: Shumaca wuxuu ka gudbayaa dhexda khadka BB-ka ilaa hoos stochastic-ka hoose wuxuu ka hooseeyaa aagga lagu gado (heerka 80) stochastic-ka ayaa hoos u dhacaya.
Sida loo furo booska
Barta ugu wanaagsan ee laga soo galo waa shamaca ugu horreeya ka dib markii laga tallaabo dhexda Bollinger.
Waqtiga uu dhacayo
Aan ka yarayn 3-5 shumacyo waqti shaqeynaya.
Qaar ka mid ah xoogaa talo ah
Ku bilow ganacsiga koontada demo. In kasta oo xaqiiqda ah in cilmi nafsi ahaan looga ganacsado koonto dhab ah ay ka duwan tahay demo. Waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato ganacsiga koontada macaamiisha.
Waa inaad had iyo jeer sugtaa in Stochastic ay ka bixi doonto aagagga xad dhaafka ah iyo kuwa la iibsaday. Dhaqdhaqaaqa suuqa ee xoogan, tilmaamuhu wuxuu "ku dhegi karaa" waqti dheer aagagiisa aadka u daran.
Haddii uu jiro isbeddel muddo-dheer ah, waxaad ku furi kartaa xulashooyin dheeri ah jadwalka ballaadhan iyadoo la adeegsanayo calaamadaha vfxAlert algorithm adaptive algorithm: M5 iyo M15. Dejinta tilmaamayaasha waa isku mid.
Jaantus ahaan, Bollinger Bands waa laba xariiq oo xadidaya dhaq dhaqaaqa sicirka kor iyo hoos, siday u kala horreeyaan. Kuwani waa khadadka asalka ah ee taageerada iyo iska caabinta, taas oo inta badan waqtiyada lagu jiro heerar ka fog qiimaha.
Kooxaha Bollinger waxay la mid yihiin baqshadaha celceliska dhaqdhaqaaqa. Farqiga udhaxeeya ayaa kujira xaqiiqda ah in xuduudaha baqshadaha ay ku yaalliin korka iyo ka hooseeya leexashada celceliska wareega ee masaafada go'an ee lagu muujiyey boqolkiiba, halka xuduudaha kooxaha Bollinger laga dhisay masaafo u dhiganta tiro cayiman oo ah leexashooyinka caadiga ah. Maaddaama baaxadda leexashada caadiga ahi ay ku xiran tahay isbeddellada, kooxuhu qudhoodu waxay hagaajinayaan ballacdooda: way sii kordheysaa marka suuqa uusan xasilloonayn, wuxuuna hoos u dhacaa xilliyada xasilloonida badan.
Sharciga ugu weyn ee dhismaha khadadka Bollinger waa bayaankan soo socda: qiyaastii 5% qiimaha waa inuu ka baxsan yahay xariiqyadan iyo 95% gudaha.
Kooxaha Bollinger waxaa laga sameeyaa seddex saf. Qadka celceliska waa celceliska socodka caadiga ah. Sadarka ugu sarreeya waa isla khadka dhexe, oo kor loogu rogay tiro cayiman oo leexashooyinka caadiga ah (tusaale ahaan, labo). Sadarka ugu hooseeya waa khadka dhexe, oo hoos loogu beddelay isla tirada leexashooyinka caadiga ah.
Waxyaalaha u gaarka ah ee kala duwanaanshaha Bollinger ayaa ah in balacyadoodu ay isbadalayaan iyadoo laga jawaabayo isbedelka isbedelka suuqa. Kooxda Bollinger waxaa loo dhisay sidii xarig dhexda dhexe, laakiin baaxadda ballaadhku waxay u dhigantaa heerka weecasho ee celceliska socodka ee muddada la falanqeeyay. Markuu isbeddel badani ka jiro suuqa, tusaale ahaan, xilliga la sii deynayo warka, kooxdu way sii ballaarataa marka suuqa ku liito suuqa.
Sida tilmaamayaasha kale oo dhan, waxaan kugula talinayaa inaad lafa-gurto BB-ga iyo tilmaamayaasha kale. Micnaha tilmaame BB - go'aamiso leexashooyinka fiiqan ee celceliska heerka isbeddelka hadda ee labada lamaane. Haddii BB si sax ah loo waafajiyo, celceliskeeda socodka (khadka dhexe) waa heer wanaagsan oo taageero / iska caabin ah, iyo xuduudaha BB waxay u adeegi karaan bartilmaameedyo marka la furayo boosaska. Badanaa, kooxaha BB waxaa lagu dhejiyaa shaxda qiimaha, laakiin sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa tilmaame kasta oo lagu soo jiito daaqad gooni ah, tusaale ahaan, oscillator.
Bollingers waxay qeexaan xagjirnimada dabiiciga ah ee isbeddelka isbeddelka. Haddii Bollinger uu u janjeero inuu kaco, qiimaha wuxuu sameynayaa dib u soo celin illaa xoog xoog leh oo ku filan uu joojiyo dhaqaaqa qiimaha. Aagga istaagga ayaa laga sameeyay hoosta kore ama ka hooseeya Bollinger hoose. Xaaladda istaaggu way sii socon kartaa illaa Bollinger uu soo jeesto oo uu bilaabo, furmo, inuu ka fogaado baarka qiimaha, taas oo muujin doonta in iska caabbinta laga adkaaday. Qiimuhu wuxuu u rogi karaa dhinaca hadda socda wuxuuna ku dhegi karaa qarka Bollinger. Si kastaba ha noqotee, midna waa inuusan luminin xaqiiqda ah in dhaqdhaqaaqa qiimaha ugu dambeeya uu ku xiran yahay dhammaan heerarka taageerada / iska caabinta, oo aan ku xirnayn oo keliya kuwa ay qaraxyadu la xiriiraan.
Horumariyaha laftiisa ayaa xusaya astaamaha soo socda ee kooxaha Bollinger:
Is beddelka qiimaha fiiqan badanaa wuxuu yimaadaa ka dib markii la yareeyo kooxda, oo u dhiganta hoos u dhaca isbeddelka.
Haddii qiimuhu ka gudbaan kooxda, qofku waa inuu fishaa sii socoshada isbeddellada hadda socda.
Haddii culeyska iyo niyadjabka ka baxsan bannaanka ay raacaan meelaha ugu sarreeya iyo isku buuq gudaha xariijimaha, dib u noqoshada isbeddelka ayaa suurtagal ah.
Dhaqdhaqaaqa qiimaha, oo ka bilaabmaya mid ka mid ah xudduudaha xariiqa, badanaa wuxuu gaaraa xadka ka soo horjeedka. U fiirsashada dambe waxay faa'iido u leedahay saadaalinta heerarka qiimaha.